Wholesale Vacuum Dryer Mugadziri uye Mutengesi | Kusanganisa
Ukanyatsotarisisa peeling michina
Spindleless ukanyatsotarisisa dzaFord
4ft ukanyatsotarisisa kugadzirwa mutsetse
8ft & 9ft ukanyatsotarisisa peeling mutsetse
Ukanyatsotarisisa peeling uye nokuveza muchina
Chokurukisa ukanyatsotarisisa peeling muchina
Mimwe michina ye Woodworking
Plywood yekugadzira mutsara
Chipolish sanding muchina
Edge yekucheka saw
Munguva yese iyi maitiro kubva pakutanga kusvika kumagumo ekuomesa, huni izere nehutsi hwakanyanyisa hwemhepo iyo tembiricha yepamusoro iri 150 ℃. Izvi zvinoona kuti pamusoro pehuni hakutsemuki, panguva imwechete, kuwedzera hunyoro hwehuni hwepamusoro, kudzikisira mutsauko pakati pehuni mukati nekunze. Chii zvakare, nekuda kweiyo yakakwira huni tembiricha, iyo tembiricha yeiyo huni musimboti inogona kusimudzwa nekukurumidza. Zvinotora maawa makumi maviri chete kuti danda re15cm dhayamita kuti uwane tembiricha yemuti wehuni pa80 ℃, iyo inogadzira yakanakisa mamiriro ekuomesa huni musimboti zvinhu.
1.Munguva yese iyi maitiro kubva pakutanga kusvika kumagumo ekuomesa, huni izere nehutsi hwakanyanyisa hwemhepo iyo tembiricha yepamusoro iri 150 ℃. Izvi zvinoona kuti pamusoro pehuni hakutsemuki, panguva imwechete, kuwedzera hunyoro hwehuni hwepamusoro, kudzikisira mutsauko pakati pehuni mukati nekunze. Chii zvakare, nekuda kweiyo yakakwira huni tembiricha, iyo tembiricha yeiyo huni musimboti inogona kusimudzwa nekukurumidza. Zvinotora maawa makumi maviri chete kuti danda re15cm dhayamita kuti uwane tembiricha yemuti wehuni pa80 ℃, iyo inogadzira yakanakisa mamiriro ekuomesa huni musimboti zvinhu.
2.Hunhu hwekuomesa kwevhavha ndeyekuti pasi pemamiriro ekumanikidza, iyo yekubikira yemvura inoderedzwa Ipo iri -0.6MPa, iyo yekubikira yemvura iri 80 degrees Celsius. Hunyoro hwehuni hwepakati zvinhu zvinogona kukurumidza kutorwa kubva mukati, inova ka3-6 nguva kunyatsoita kweyakajairwa kuomesa.
3.The hunhu kunyorova chiutsi kuomesa ndeyekuti huni mune yakanyanya tembiricha uye hunyoro nharaunda, inogona kusvika tembiricha renji isingakwanise kusvikwa neyakajairwa kuomesa, uye kana ambient tembiricha yehuni inosvika inopfuura 100 ℃, huni hunyoro hunyoro hunotora pachinzvimbo chekunyorova hunyoro, hunyoro hwehuni hunotorwa zvakasikwa.Uye mune yakanyanya tembiricha mamiriro, huni zvakare dzinogona kudzikiswa.
4.Vacuum kuomesa nekunyorova kuomesa kuomesa kunoitwa neimwe nzira kuti huni huratidzike senyika ye "hunyoro hwekuchera - hunyoro hunotora - hunyoro kuburitsa" kutenderera kutenderera, uko kuchabvisa zvachose huni mukati kushushikana, kuenzanisa hunyoro hunyoro zvemukati, kudzivirira hwakasiyana hunyoro zvemukati saka kuti tidzivise kumonyoroka, deformation uye mamwe matambudziko.
5.High tembiricha kupisa kurapwa, uchishandisa yakazara saturu seyodzivirira mweya, uye inogara ichiwedzera tembiricha muhovhoni kusvika tembiricha inodiwa pakurapa kupisa. Mune ino tembiricha renji, iyo huni pamusoro inosimbiswa, uye kunwa kwemvura zvinhu mukati mehuni zvinoora, kuitira kuti uwane hunhu hwekusimba kwehuni.
1. Iwo wepamusoro-kumagumo ese-mu-mumwe muchina, matatu modes（Kuchenesa mweya, kuomesa hunyoro, micro carbonizing） inogona kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa muitiro.
2.Kuchienzaniswa neiyo yepamusoro-frequency mhando, hapana chikonzero chekuzadza huni uye hapana chikonzero chekuvimbisa chimiro chehuni chinogara chiri. Kamwe kana paine mukaha mumushini wepamusoro-frequency, hunyoro hwehuni huchave hwakaenzana. Rudzi rwemuchina uyu hapana chikonzero chekushushikana nezvenyaya iyi.
3. High frequency muchina nekuomesa huni dzakaoma zviri nyore kuoneka uchipaza, muchina uyu unonyanya kukodzera kune isingawanzo yakaoma yakaoma huni uye imwe huni yakaoma.
Max. kuwanda vhoriyamu 6 cbm
Kunopindirana Dimensions 5.5m * 2.5m * 2.6m
Kiln mukati mehukuru 1.8m * 4.7m
Kiln muviri zvinhu Dombo mvere / Yakakwira simba simbi ndiro
Ukobvu kuputira rukoko 5cm
Kuchenesa simba 36kw
Heating muoti Magetsi kudziyisa
Steam jenareta simba 6-9kw
Simba remhepo 0.4kpa
Kupisa kwemhepo 150 ℃
Kutenderera feni Yakakwirira tembiricha inodzivirira yakanaka uye inodzosera inotenderera mota
Vacuum pombi yakawanda 1
Kudzora system Zvizere otomatiki PLC kutonga
Yakakodzera zvinhu Zvisina kuumbwa zvakaumbwa zvakapfava uye hardwood
Kuomesa kutenderera Matanda pazasi pe5cm 5daysMatanda ari pamusoro pe5cm 7days
Kuwedzera kwekukosha kwehuni Mumwe anopfuura chiuru
Pashure: chokurukisa huni peeling muchina
Zvadaro: Ukanyatsotarisisa peeling And Cutting Machine